Signal, n'ikpeazụ enweghị Google urụk | Site na Linux
Signal, akpatre enweghị Google ndido urụk
Bebel | | Aplicaciones, GNU / Linux, Noticias
signal eji Firebase Cloud Izi ozi (nke bụbu Google Cloud Message ma ọ bụ GCM) nke, dịka ị chere, dabere na Google. Echere na Google na-anapụta ma nata data ma enweghị ike ịgụ ya (nke anaghị egbochi ha ịnwe ndekọ banyere onye na-agwa onye okwu), mana n'agbanyeghị nke ahụ, iji mgbaàmà na-egosi ịnwe ekwentị na Google na-arapara n'ahụ, nke gụnyere ụdị ọzọ nke adịghị ike nzuzo ... ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ ọ dịla ruo ugbu a. Zọpụta ụbọchị a dị ka ụbọchị mgbaàmà ghọrọ ngwa izipu ozi kacha mma.
1 Nbanye na WebSocket kama GCM
2 Nbanye na PC
3 Ihe mgbakwunye maka Vivaldi
Nbanye na WebSocket kama GCM
Dị ka ndị niile so na mgba maka nzuzo mara, signal Ọ bụ nnukwu ngwa nke na-ezipụ ozi anyị site n’otu ebe ruo n’otu; ọbụna Snowden - onye meghere anya ụwa niile site na ịkọ banyere oke nledo nke ndị bi na ụlọ ọrụ na gọọmentị - ọ na-eji ya kwa ụbọchị, ma mgbaàmà nwere nsogbu mere ka ọ ghara ịba uru nye ọtụtụ ndị: ọ jiri Firebase Cloud Messaging (ma ọ bụ GCM maka aha ochie ya: Ozi Cloud Cloud). Nke a gbanwere mgbe Moxie Marlinspike mgbasa Na February 20, Mgbama agaghị adị mkpa iji Google iji jikwaa ozi sitere na mbipute 3.30 (nke dị ugbu a na beta na nke ekwesịghị iwe ogologo oge iji rute na nsụgharị anụ ahụ), nke bụ akụkọ dị ebube nye ndị niile Anyị na-eji ekwentị n’ejighi anya Google ugbu a.
Ma olee otu ha ga-esi gaa nyefe ọkwa Kwaa ma jikwaa ozi? con WebSocket, “Teknụzụ na-enye ọwa nkwukọrịta ụzọ abụọ na zuru-duplex ihe karịrị otu oghere TCP ». N'okwu dị mfe, ngwa ahụ ga-enwe ike ịchọpụta ma ọ nwere Ọrụ Google Play. Ọ bụrụ na ọ dịrị, ọ ga-eji GCM; ma ọ bụrụ na ọ bụghị, WebSocket.
Ozi ọzọ magburu onwe ya bụ na, ebe ọ ga-adịkwaghị mkpa iji Google, enwere atụmatụ dị mkpirikpi iji tinye mgbaàmà na ụlọ ahịa sọftụwia n'efu dịka F-Droid, ma ọ bụ site na eze ma ọ bụ site na nchekwa.
Nbanye na PC
Ebe ọzọ siri ike ị gafere bụ iji mgbaàmà na kọmpụta. Nanị ụzọ a ga - esi mee ya bụ site na Google Chrome ma ọ bụ na Chromium kachasị mma (ụzọ ọzọ emeghe ụzọ Chrome). Nsogbu bụ na, ọzọ, ọ dị mkpa iji sava Google ka ndị nchọgharị a jikọọ na akaụntụ gị iji mekọrịta ihe niile.
E nwekwara nhọrọ iji ihe nchọgharị ahụ Vivaldi nke, dika o dabere na Chrome, na-eji otu mgbakwunye na plugins eme ihe. Ọ bụrụ na ịnọ na Debian ma ọ bụ nkwekọrịta (Ubuntu, elementrị, wdg), naanị ị ga-ebudata faịlụ .deb ebe a ma dee: sudo dpkg -i Descargas/vivaldi-stable1.7.735.46-1amd64.deb ; sudo apt-get -f install. Rịba ama na mgbe oke -i bụ ụzọ ebe ebudatara faịlụ .deb (na-abụkarị folda Downloads na folda ụlọ gị). Ozugbo arụnyere Vivaldi gaa https://chrome.google.com/webstore/detail/signal-private-messenger/bikioccmkafdpakkkcpdbppfkghcmihk ma wụnye ngwa mgbama Ama maka inwe ike gakọrịta ekwentị gị na kọmputa.
N'ihe banyere Fedora, ịkwesịrị ibudata ihe ahụ faịlụ rpm ma dee sudo rpm -ivh Descargas/vivaldi-stable1.7.735.46-1amd64.deb. Otu dị ka ihe atụ dị n’elu, gbaa mbọ tọọ ụzọ ziri ezi mgbe emechara -ivh.
Ọ bụrụ na ị na-eji Arch ma ọ bụ nkwekọrịta (Antergos, Manjaro, wdg), ihe niile dị mfe karị. Dị nnọọ pịnye yaourt -S vivaldi ọ bụkwa ya
Mepee Usoro Nzuzo Ọ naghị enweta ego na mgbasa ozi ma ọ bụ na-ere data nke ndị ọrụ ya, yabụ ọ bụrụ na ị na-eji mgbaàmà wee nwee ike inye ihe, nke a bụ peeji nke onyinye.
Ihe mgbakwunye maka Vivaldi
Vivaldi bụ ihe nchọgharị nke onye isi oche mbụ nke Opera mepụtara iji gbalịa ịlaghachi na egwu ahụ, dị ka ya si kwuo, Opera furu efu. Ọ ka bụ ọrụ na-aga n’ihu, yabụ na ụfọdụ ihe anaghị arụ ọrụ otu o kwesiri, mana ị nwere ike ịme ihe ọ bụla. Ihe kachasị iwe banyere iji ya eme ihe na GNU / Linux bụ enweghị ike igwu vidiyo, mana ọ bụ ihe dị mfe idozi. Maka nke a, anyị chọrọ ngwugwu chromium-codecs-ffmpeg-extra ma ọ bụ libavcodec-extra57 na Debian (sudo apt install chromium-codecs-ffmpeg-extra o sudo apt install libavcodec-extra57), nke gunyere ffmpeg codecs iji kpọọ ihe ọ bụla ọdịnaya na weebụ. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịga n'ihu ma kpọọkwa ihe nchekwa DRM (dị ka Netflix), nke ahụ dị ntakịrị karịa ma ọ gaghị ekwe omume. Maka nke ahụ ịkwesịrị ibudata edemede a ma gbaa ya ọsọ. Iji mee nke a, detuo ọdịnaya nke edemede ahụ, mepee ederede ederede, kpoo ọdịnaya ahụ ma chekwaa faịlụ ahụ dị ka latest-widevine.sh (chekwaa ya na folda ụlọ gị ma ọ bụ gbanwee iwu ndị a na ụzọ ebe edemede ahụ dị). Wee mee iwu ndị a:
sudo chmod 764 latest-widevine.sh (nke a na-enye ikikere iji gbaa edemede ahụ)
sudo ./latest-widevine.sh (na-agba ọsọ edemede na ajụjụ)
Ihe odide a na-etinye Chrome, njikọ libwidevinecdm.so (ọbá akwụkwọ achọrọ maka Netflix) na Vivaldi, ma mesịa wepụ Chrome.
N'ihe banyere Arch na nkwekọrịta, dị ka oge niile, ihe niile dị mfe karị. Dị nnọọ pịnye yaourt -S vivaldi-ffmpeg-codecs vivaldi-widevine na voila, ị ga-enwe koodu vidiyo vidiyo gụnyere nke dị mkpa iji lelee Netflix.
Ozugbo emere nke a, ị ga-enwe ike ịnụ ụtọ ịlele usoro ma ọ bụ ihe nkiri na Netflix ka gị na ndị kọntaktị gị na-ekwurịta okwu site na Mgbama.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » Signal, akpatre enweghị Google ndido urụk
Nsogbu a ka dị ka ọ gwụla ma anyị bụ ndị ọrụ dị elu ma anyị bụ mgbọrọgwụ na kọmputa anyị (ọkachasị ma ọ bụrụ na anyị gbanwee ROM).
N'ihi na a nkịtị ọrụ ihe ga-abụ otu ihe ahụ dị ka mgbe niile. Telegram na-enye nhọrọ nke ịghara iji Ọrụ Play.
N'ezie, ederede ederede maka ndị ọrụ toro eto bụ ndị, ọkachasị, achọghị ịnweta Google Play Services na ekwentị ha. Ọ bụrụ na onye ọrụ ahụ abụghị onye ọrụaka, ọ ga-enwe obi ụtọ na whatsapp na ọ bụ ya.
Banyere Telegram, ọ masịrị m nke ukwuu ma n'eziokwu m na-eji ya kwa ụbọchị, mana na nzuzo ọ dịghị mma n'ihi na ọ naghị ezoro ezo ihe ọ bụla na ndabara. Izo ya ezo adighi-ekwe omume na otu.
Mbubreyo. Echere m na oge nke mgbaàmà maka nnukwu ndị na-ege ntị agafeela na Telegram ewerewo ọnọdụ nke mgbaàmà kwesịrị ịnwe site na mmalite dịka ọ dị nchebe karịa ndabara karịa Telegram, nke na-anaghị eji e2e izo ya ezo karịa na nkata nzuzo.
Ugbu a ndị mmadụ chọrọ onye ozi ọzọ na Wasa ejirila Telegram, na Signal enweghị ike ịsọ mpi na puku ọrụ TG (ọwa, bọọlụ, akwụkwọ mmado, Telegra.ph na ndị na-abịa).
Ihe nwute, n'ihi na jụ Duroc ibipụta koodu nke sava ha na ibipụta koodu nke ngwa mkpanaka n'otu oge ahụ ha na-ebipụta ngwa ahụ na Gplay mere ka ọ bụrụ eziokwu na sọftụwia nwere nke ọ bụla n'ime ọnwa 3 ma ọ bụ 4 ọ bụla mepere emepe. Isi mmalite, ruo mgbe mbipute nke koodu ha bipụtara na-abaghịzi uru ma ọ nweghị onye ma ha ma koodu isi. Mana ọ bụ na ọbụlagodi na mgbaàmà nwere ọrụ TG, ndị mmadụ agakwaghị agbanwe; otu ugboro dị mma, site na WA ruo TG, mana ọ bụghị ugboro abụọ.
Ka o sina dị, ọbụlagodi maka ndị na-echegbu onwe ha banyere nzuzo ha ọ ka bụ akụkọ dị ukwuu na ha nwere ike iji mgbaàmà na ngwaọrụ Google.free ha, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ha bụ obere otu. Ezigbo ozi, n'ọnọdụ ọ bụla.
anaghị arụ ọrụ maka lubuntu 16
komorebi: A mara mma na customizable akwụkwọ ahụaja njikwa